प्रविधिको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा अमेजन बिक्रेता उपकरणहरू के हो?
सबै समृद्ध अमेजन बिक्रेताहरूले अनुकूलन अनुसन्धान र विश्लेषणात्मक उपकरणहरूको दायरा प्रयोग गर्दछ जुन उनीहरूको अनुकूलन अभियान विकास गर्न र उत्पादन उत्पादन सूचीमा बिक्री गर्नका लागि।. Amazon ले तपाईंको लाभको बारेमा हेरचाह गर्दछ र तपाईंको उत्पादन र अर्डर व्यवस्थापन गर्न केही आधारभूत उपकरणहरू प्रदान गर्दछ. तथापि, यी अमेजन प्रोग्रामहरू तपाईका लागि अधिकतर अवस्थामा उपयोगी हुन सक्दैन. यसैले अधिक सम्भावित ग्राहकहरू आकर्षित गर्न र राजस्व बढाउन तेस्रो-पक्ष अमेजन बिक्रेता उपकरणहरू प्रयोग गर्न उचित छ.
अमेजन बिक्रेता उपकरणले तपाईको सबै व्यावसायिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ, ट्राफिक-उत्पन्न खोज सर्तहरू अनुसन्धान गर्न सुरु गर्दै र किन्क्स बक्स मूल्य निर्धारणको साथ परिष्करण गर्न सक्दछ।. त्यसोभए, तपाइँलाई आवश्यक सबै चीजहरू तपाईंको सबै विकल्पहरू बुझ्न र उपकरणको सही मिश्रण फेला पार्नका लागि तपाइँको अमेजन ई-वाणिज्य परिचालनलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थित गर्न हो।.
यस आलेखमा, हामी केहि अमेजन बिक्रेता उपकरणहरू छलफल गर्नेछौं जुन तपाईंको अमेजन सूचीमा थप रूपान्तरित ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न र अमेजन बिक्री बढाएको छ।.
अमेजन उपकरण बिक्री को लागि
अमेजन मा तेजी देखि भुगतान गर्न चाहान को लागि उपकरण
अमेजन विक्रेता को अनुसार केन्द्रीय र सेन्टर सेन्टर, व्यापारीले उनीहरूको भुक्तानी महिनामा दुई चोटि भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सक्छन्. यदि तपाईं यस प्रक्रियालाई छिटो चाहनुहुन्छ (कुनै पनि शक नगरिकन तपाइँ यसलाई चाहानुहुन्छ), तपाइँलाई भुक्तानी उपकरणहरू मध्ये एक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ. तिनीहरू अमेजन बिक्रेताहरूले महिनामा दुई पटक भन्दा बढी छिटो भुक्तानी गर्न मद्दत गर्छन्. यी उपकरणहरू प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो पैसा दैनिक आधारमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो प्रकार को सामान्यतया कारखाना को रूप मा जानिन्छ. तीव्र भुक्तानी उपकरणहरू दैनिक बिक्रीको आधारमा अमेजन बिक्रेताहरू तिर्छन्. यी औजारहरू नियमित पेआउट तालिका अनुसार प्रतिमा अमेजनबाट सीधै एकत्रित गर्दछ.
यस्तो उपकरणहरू लागू गर्दै, तपाईं आफ्नो व्यापारलाई अझ बढि आफ्नो नगदको लागि तत्काल पहुँचको कारणले तपाईंको व्यवसाय बढ्न सक्षम हुनेछ।. यसले तपाईंलाई अमेजनबाट स्वतन्त्र महसुस गर्न र तपाईंको व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न मौका दिनेछ. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो तालिकामा बिल भुक्तान गर्न आफ्नो नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेछ, अमेजनको छैन.
एक गुणवत्ता पेआउट उपकरण जसले तपाईंको अमेजन व्यापार आवश्यकतालाई पूर्णतया उपयुक्त बनाउनेछ. यो उपकरणले सबै आकारका विक्रेताहरूलाई दैनिक भुक्तानी प्रदान गर्दछ. सुरु हुने मूल्य प्रति महिना अमेजन बिक्रीको 2% हो.
यदि तपाईं अमेजनमा उत्पादन अवसरों खोज्दै हुनुहुन्छ भने, खोजशब्द र उत्पाद अनुसन्धान
जो कि खोजशब्द र उत्पाद अनुसन्धान
औजारहरू तपाईंको लागि उत्तम सेवा गर्नेछन्. यस्तो उपकरणहरू प्रयोग गर्दै, तपाईले अमेजनको खोज डेटामा ड्रिल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ कि कुन खोजी सर्तहरू तपाइँको उत्पादनहरू खोज्न खोज सर्तहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्।. तपाईं प्रत्येक चयन गरिएको कीवर्ड वा कुञ्जी वाक्यांशको खोजी भोल्युम जाँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ. तपाईं लाभकारी क्यालेन्डरहरू पनि अमेजनमा प्रत्येक खोज अवधिको लागि समग्र लागत निर्धारण र लाभ क्षमता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
सान्दर्भिक खोजी सर्तहरू र उत्पादनहरू पत्ता लगाउन जसले तपाईंलाई अमेजनमा एक महत्त्वपूर्ण राजस्व ल्याउनेछ, तपाईंलाई तपाईंको अमेजन अनुकूलन अभियानको तल रेखामा ठूलो अनुसन्धान अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।. उच्च-भोल्युम खोज सर्तहरूले बिक्री-ड्राइविंग अमेजन SEO उत्पादन सूची सिर्जना गर्न र अमेजनमा अधिक बिक्री जित्न मद्दत गर्नेछ. अधिकतर व्यावसायिक खोजशब्द अनुसन्धान सफ्टवेयरले तपाईलाई प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषणात्मक डेटा प्रदान गर्न सक्छ, जुन उनीहरूको मूल्याङ्कन र मुनाफामा एक शिक्षित झलक दिन्छ.
वेबमा धेरै अमेजन खोजशब्द र उत्पादन अनुसन्धान उपकरण छन्. तपाईंले उनीहरूलाई भन्दा राम्रो जाँच गर्न र आफ्नो व्यवसायको लागि सबै भन्दा उपयुक्त खोज्नु पर्दछ.
दायरा एक गुण अमेजन अमेजन अनुसन्धान उपकरण हो जुन व्यावहारिक अमेजन खोजी सर्तहरू र उत्पादनहरू खोज्न काम गर्दछ।. यसले गुगल क्रोम एक्सटेन्सनसँग बिक्री-ड्राइभ खोज सर्तहरू र मूल्यवान वस्तुहरू खोज्न मद्दत गर्दछ. दायराले उत्पादको लागि उच्चतम रैंकिंग सर्च सर्तहरू देखाउँछ जुन तपाईंलाई अमेजन खोजीमा उभिरहेको छ. एक बढी लाभ यो छ कि तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धी बिक्री को लागी चालु गर्दै हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ.
दायरा अनुसन्धान उपकरण प्रयोग गर्दै, तपाई खुदरा लाग्ने वस्तुहरूको लागि आफ्नो सम्भावित मुनाफा बुझ्न सक्षम हुनुहुनेछ।. तपाईं मूल्य, शुल्क, र अमेजनमा कुनै पनि उत्पादनको लागि बिक्री अनुमान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. स्कोपद्वारा प्रदान गरिएका सबै यी डाटाहरूले तपाईंको खोजलाई सङ्कलन गर्न मद्दत गर्नेछ. तपाईं एक CSV फाइलमा थप सबै विश्लेषणहरू थप विश्लेषणको लागि विशेषज्ञ बनाउन सक्नुहुनेछ.
प्रति महिना सुरु हुने मूल्य $ 32 हो. 50.
सोनार एक मुक्त अमेजन खोजशब्द शोध उपकरण हो जो वास्तविक डेटा मा सबै शोधकर्ताहरु लाई वास्तविक ग्राहक खोज प्रश्नहरु बाट आधारित छ।. सोनारले तपाईंको संभावित ग्राहकहरू अमेजनमा खोज्ने के हो भन्ने पत्ता लगाउन एक जटिल एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ र सबै डाटाबेसमा आफ्नो डेटाबेस सङ्कलन गर्दछ. अन्य खोजशब्द उपकरणहरूको तुलनामा, सोन व्यापारीहरूले ASIN रिवर्स लुकअप, विस्तारित खोजको पर्याय खोज सर्तहरू, हरेक खोजशब्द प्रति Amazon खोज भोल्युम, र धेरै अन्य मूल्यवान कार्यहरू जस्ता अधिक अवसरहरू प्रदान गर्दछ।.
यो उल्लेख गर्न योग्य छ कि सोनारले केवल खोज सर्तहरू समावेश गर्दछ जसको लागि एएसिन को खोज परिणामको पहिलो पृष्ठमा रैंकिंग हो।.
यो नि: शुल्क क्रोम ब्राउजर अनुप्रयोग हो.
सूचीबद्ध वस्तुहरूको आवश्यकता पर्नेहरूको लागि उपकरण
त्यहाँ अमेजन बिक्रेता उपकरणहरू छन् जसले व्यापारीहरू अमेजन उत्पाद सूचीहरू र बिक्रेता बाहिरको सूची प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ। केन्द्रीय ड्याशबोर्ड. यी बिक्रेता उपकरणले अमेजन उत्पाद डेटा बाह्य डेटाबेसमा जडान गर्दछ. यी उपकरणहरू लागू गर्दै अनलाइन व्यापारकर्ताहरूले उत्पादनहरू थप गर्न, सूचीबद्ध सुधार गर्न, सूची ट्रयाक गर्न, मूल्य निर्धारण समायोजन गर्न सक्दछ, र अझ थप कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्दछ।. केही अमेजन सूचीकरण उपकरणहरूले तपाईंको सूची डेटा अन्य बिक्री च्यानलहरूमा सिंक्रोनाइज गर्न सक्दछ. यसले तपाईंलाई धेरै बजारमा भरिएका सबै उत्पादनहरू बेच्ने मौका दिन्छ. यसबाहेक, तपाईं सबै बिक्री च्यानलहरूको लागि अर्डर र ढुवानी प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ.
यी इन्वेंट्री व्यवस्थापन उपकरणहरूको धेरै धेरै पहुँचयोग्य मूल्य निर्धारण नीति प्रदान गर्दछ. त्यसैले तिनीहरू ग्राहकहरू बहुचेतना बिक्री आवश्यकताहरू समर्थन गर्न सक्छन्.
यी बिक्रि उपकरणहरुमा बिक्रेताइन्जिन प्लस ($49. 95) - पूर्ण व्यवस्थापन उपकरणहरू प्रदान गर्नुहोस् जो जोलिस्टर ($29) - अमेजन र ईबे बिक्रेता दुवैको लागि सेवा; Vendio ($ 99) - अमेजन बिक्रेता र अन्य व्यापारिक प्लेटफर्महरूको लागि पूर्ण रूपमा सेवा गर्दछ; बिक्रिब्रेट ($ 183) - अमेजन र अन्य लोकप्रिय बजारमा ठाउँहरूमा विक्रेन्डहरू र उच्च भोल्युम रिटेलरहरूको लागि सूट Source .